【 AMAKHODI OMLILO WAMAHHALA 】 Abuyekeziwe NAMUHLA ▷ Julayi 2022
Imivuzo Yomlilo Yamahhala
Izincazelo For Free Fire
Izinhlamvu zomlilo zamahhala
Izikhali Zomlilo zamahhala
Amakhodi omlilo wamahhala anamuhla ngoMsombuluko Julayi 4, 2022
Lezi yizo Amakhodi omlilo wamahhala wanamuhla, NgoMsombuluko Julayi 4, 2022
Khumbula Chofoza inkinobho ebomvu ukuze uthole imiklomelo ye-FF YAMAHHALA Manje.
CHOFOZA LAPHA UKUZE UTHOLA AMADAYMOND AMAHHALA
Khumbula ukushiya i-ID ye-akhawunti yakho yamahhala kanye nesifunda emazwaneni.
🎁 UHLU LWAMAKHODI EDIYMOND
🚀 Kugcine ukubuyekezwa NAMUHLA 🚀
I-N34M RTYO HNI8
I-X4SW FGRH G76T
Idatha ye-FGHE U76T RFQB
I-FT6Y GBTG VSRW
Njalo Ngemizuzwana engama-60 Uhlu luzobuyekezwa Ngokuzenzakalelayo Ngamakhodi Amasha Asebenzayo E-FreeFire.
Bekezela futhi gcina ikhasi livuliwe, linda ukuthi ikhawunta iqede bese Uvuselela Ikhasi.
Khumbula lokho Owokuqala Ngamunye Kuphela Ozothola Imiklomelo ye-FF.
🎁 Linda Ikhawunta Iphele Ukuze Ubuyekeze Ikhasi 🎁
Akuphi Amakhodi Edayimane Asebenziseka?
Sebenzisa Amakhodi Womlilo Wamahhala kule webhusayithi: umvuzo.ff.garena.com.
CHOFOZA LAPHA UKWABELANA
Khumbula YABELANA le webhusayithi nabangani bakho uma ufuna ngiqhubeke nokubuyekeza Amakhodi Nsuku Zonke.
Khumbula Ukuvakashela Iwebhu Nsuku Zonke Ukuze Ufune Imiklomelo Emisha.
Amakhodi e-FF Asebenza Kusiphi Isifunda?
Okwamanje Amakhodi Womlilo Wamahhala Ayasebenza Kulolu hlu Lwezifunda engizolushiya lapha Ngezansi, khumbula ukuthi kuye ngokuthi iyiphi ikhodi engahluka futhi isebenze kuphela esifundeni esisodwa noma kwesinye, kodwa sizohlala sishicilela uhlu olukhulu Oluhlanganisiwe kuzo zonke Izifunda. njengeNyakatho Melika, eNingizimu Melika (I-LATAM: I-Latin America ne-Central America) E-Asia, eYurophu, e-Afrika nase-Oceania.
Australia, Canada, United States (USA noma US)
El Salvador, Cuba, Panama, Ecuador, Guatemala, Haiti, Argentina, Paraguay, Honduras, Puerto Rico, Bolivia, Peru, Nicaragua, Dominican Republic, Brazil, Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela kanye neBelize.
Imiklomelo Yamahhala Yekhodi Yomlilo
Lolu Uhlu Lweminye Imiklomelo ongayithola mahhala Ngamakhodi Omlilo Wamahhala:
Amadayimane, Izingubo Nezikhumba, Izikhumba Zezikhali, Izilwane ezifuywayo, Izinhlamvu.
Ingabe Amakhodi Omlilo Wamahhala Amadala Ayasebenza?
Ngokuvamile akunjalo, njengoba eminingi iyimicimbi yesikhashana ekhethekile, kodwa kuneminye engaphelelwa yisikhathi ngakho ihlala isebenza, imbalwa futhi ngokujwayelekile ikhethekile kakhulu ngakho iphathwa iqeqebana labantu futhi iningi alikho esidlangalaleni.
Imibuzo Ebuzwa Njalo mayelana « Imiklomelo FF «
Ngizoshiya imibuzo evame kakhulu ekhona mayelana namakhodi Womlilo Wamahhala ukuze ube nezimpendulo ezifanele.
AYINI AMAKHODI OMLILO WAMAHHALA
Amakhodi omlilo wamahhala ayinhlanganisela yezinombolo ezingu-12 nosonhlamvukazi okuthi uma usuwafakile ekhasini elisemthethweni elinikwe wona amandla, ungawahlenga ukuze uthole imiklomelo emangalisayo.
Lawa makhodi angaba semakhadini aphrintiwe noma kwizipho zedijithali.
Wonke amakhodi womdlalo asebenza, okusho ukuthi angaphelelwa yisikhathi, zama ngaso sonke isikhathi ukuwahlenga ngokushesha nje lapho uwathola.
Yini engingayithola NGAMAKHODI?
Okwamanje usebenzisa ikhodi, inkundla ye-Garena ikhethela wena umklomelo ngokungahleliwe, imiklomelo ingahluka phakathi kwezinto eziningi, lapha ngiyakutshela ukuthi yini ongayiwina uma usebenzisa ikhodi ye-Free Fire.
Isilwane esisha; ungaba nomuntu odlala naye futhi usize ngamakhono akho okwenza iBooyah.
Izingubo ezintsha; ngoba kuhlale kubalulekile ukugqoka imfashini yakamuva.
Izesekeli; Ukusuka kupharashute eyingqayizivele kuya ezikhunjeni ezinhle kakhulu, umlingiswa wakho angadlala ngezinto zokusebenza zakamuva kulo mdlalo.
Amadayimane negolide; Le yimiklomelo engcono kakhulu, ngoba ngamadayimane negolide ungathenga futhi uthole imiklomelo eminingi futhi okuhle ukukhetha okukhethekile oyifunayo.
AMAKHODI OMLILO WAMAHHALA AYANI?
Ngokuvamile ezisetshenziselwa injongo yokuthola umklomelo kulo mdlalo, kungaba ngezingubo, ukunyakaza, amadayimane, izinhlamvu, njll.
NGAWatholaphi Lawo makhodi?
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuthola la makhodi, kepha qaphela ukuthi wonke ngeke aphephe futhi ngeke akusebenzele njalo.
Cishe i-Garena ihlala inikeza amakhodi aguqukayo womdlalo emicimbini yawo, nawo ajwayele ukukwenza kumanethiwekhi awo asemthethweni wokuxhumana nabantu, ngaso sonke isikhathi ngesimo sokuthi uhlangabezana nenhloso ethile, la makhodi awusoze abe nanoma yiliphi inani lezomnotho, akhululekile ngokuphelele.
Kunamawebhusayithi amaningi, ama-youtubers, ama-influencers, njll. lapho kulayishwa khona amakhodi omvuzo womlilo wamahhala kodwa kulesi sixhumanisi https://codigosfreefire.gratis/ uzohlala uthola amakhodi akamuva abuyekeziwe futhi asebenziseka ngokugcwele.
LOKHO OKUMELE UKWENZE UKUZE USEBENZISE AMAKHODI OMLILO WAMAHHALA
Lapho usuthole ikhodi yakho kuwebhusayithi eyedlule, kuzofanela uthathe izinyathelo ezilandelayo zokuhlenga amakhodi akho bese uthole nemivuzo emihle.
Kufanele uye ekhasini elisemthethweni lokushintshana kwemivuzo lapha https://reward.ff.garena.com/es Kanye ekhasini kufanele uthole ukuthi ungene kuphi ngeGoogle, Facebook, Huawei noma i-VK, khumbula ukuthi uma ufaka noma yikuphi kwalokhu amakhasi kufanele ubhale idatha efanayo ongena ngayo kulo mdlalo.
Lapho usungenile i-akhawunti yakho, ikhasi lizovuleka ngenketho yokufaka amakhodi, lapho kufanele ubeke khona izinhlamvu eziyi-12 ze-alphanumeric, ugcwalise, ngezinhlamvu ezinkulu futhi ngaphandle kwezikhala.
Bese uzochofoza ku-'qinisekisa' bese kuba kanjalo, manje usungakwazi ukuthola umvuzo wakho ngokuqondile endaweni yakho yokwamukela i-Free Fire.
Kungani ngingakwazi ukusebenzisa amakhodi ami omlilo wamahhala?
Uma bengayamukeli ikhodi yakho yomlilo yamahhala mhlawumbe kunjalo ngoba siphelelwe yisikhathi futhi udinga ikhodi engaphelelwa isikhathi ukuze zikunikeze umvuzo, noma mhlawumbe ulandela eyodwa yezinyathelo ezishiwo ngaphambilini ezingalungile.
Ukucaciswa kwemiklomelo osuhambile kungatholakala:
Ukuya eposini wathola uphawu kusuka kumdlalo ukuthi uzothola ekhoneni eliphezulu kwesokudla futhi lapho ungafuna konke onqobile.
Ku-'qoqo lakho 'uzothola izinto ezibonakalayo oziwinile ezifana nezingubo, izilwane ezifuywayo, izesekeli njll; ngakolunye uhlangothi, imiklomelo yegolide noma yedayimane izobe ingeziwe ngqo ku-akhawunti yakho.
KWENZEKA KANGANI UKUZE UNGINIKE IZINDLELA ZOKUZIPHATHA
Uma ususebenzise amakhodi Womlilo Wamahhala futhi uthole imiklomelo yakho, azoba kugeyimu esikhathini esiphezulu esiyimizuzu engama-30.
Khumbula ukuthi iGarena ayinaso isikhathi esiqondile sokubanikeza amakhodi, ngakho-ke, kufanele wazi amanethiwekhi abo asemthethweni wokuxhumana nomphakathi noma iwebhusayithi esiyibize yona isikhashana edlule.
AWONKE AMAKHODI Asetshenzisiwe?
Amakhodi omlilo wamahhala anokuphelelwa yisikhathi kweminyaka, izinyanga, izinsuku noma amahora, uma le khodi isiphelelwe yisikhathi ngeke isakwazi ukuhlengwa nganoma yimuphi umklomelo.
Izikhathi eziningi la makhodi angahle angakusebenzisi njengoba amanye ancike ezweni lapho uzama ukuwahlenga.
Uma kwenzeka uba nobunzima ngamapulatifomu, amakhodi noma i-akhawunti yakho, kufanele uthinte ukusekelwa kwenkampani ukuxazulula inkinga yakho.
Ayikho ikhodi engasetshenziswa ngenye i-akhawunti noma yesivakashi, kufanele ungene ne-akhawunti ye-Free Fire ojwayele ukudlala ngayo.
YILUPHI HLOBO LAMAKHODI OMLILO WAMAHHALA AKHONA?
Amakhodi omlilo wamahhala ngokuvamile ahlukaniswa abe:
Amakhodi amadala, ngoba ezimweni eziningi abanye bayaqhubeka ukusebenza ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kuya ngez izehlakalo noma amazwe lapho uzama ukuwahlenga.
Amakhodi amasha omlilo wamahhala yiwo abuyekezwa njalo, ukuze kugcinwe abadlali bazi ngemiklomelo emisha nemiklomelo.
Amakhodi akhethekile, izikhathi eziningi yilawo anikezwa yiGarena ngomcimbi obaluleke ukwedlula amanye, kungaba yisikhumbuzo noma ukubuyekeza ngokuphelele komdlalo, lawa makhodi avame ukuba nokuqina okuthe xaxa kunokwabanye.
amakhodi ngezwe, lawa amanye amakhodi i-Garena ayinikela kaningi ezweni elilodwa noma indawo, noma ngoba anomcimbi okhethekile kule ndawo ethile, la makhodi ngeke asebenze emazingeni aphesheya.
Khumbula uma ufuna amagugu amahhala ungavakashela amagugu.mahhala
amakhodi diamond - diamantes khulula umlilo - amagugu wamahhala - khulula umlilo akhawunti khulula - ijeneretha yedayimane - indlela Hack khulula umlilo - Hack for free fire